Roy Hodgson Oo Qirtay In Wayne Rooney Uu Ka Soo Bixi Waayay Wixii Laga Filanayay Euro 2012. - jornalizem
Roy Hodgson Oo Qirtay In Wayne Rooney Uu Ka Soo Bixi Waayay Wixii Laga Filanayay Euro 2012.
Roy Hodgson ayaa qirtay in Wayne Rooney uusan ka soo bixin wixii laga filayay ciyaaraha Euro 2012, lakiin waxa uu dareensan yahay in cadaadis badan dusha laga saaray hal nin.
England ayaa weeraryahankooda ganaax ku weysay labadii kulan ee ugu horeysay Group D, lakiin waxa uu goolka guusha kula soo laabtay kulankii ay ka badiyeen Ukraine. Lakiin Rooney ayaa muuq belay kulankii wareega 8da ee Italy.
“Rooney si aad ah ayuu isagu dayay inuu wax sameeyo, lakiin ciyaartiisii ugu fiicneyd lama uusan soo bixin. Waxaan qabaa inuu qiran lahaa taas”.
“Waxaa taas sabab u ah waxyaabo badan oo kala duwan, lakiin uma maleynayo inay sabab u tahay taam ahaanshihiisa. Wax badan waad ku eedeyn kartaa taam ahaanshaha lakiin maba jirin wax aan kaga shakino inuusan taam aheyn”
“Qaabka orodkiisa iyo tababarkii uu qaatay iyo ciyaarta markii uu ciyaarayay intaba waa uu wanaagsanaa”.
“Lakiin waxaan qabaa inaan dusha ka saarnay waxyaabo badan oo aan ka filaneynay”
“Markii uu ganaaxay ku seegay labadii kulan ee ugu horeysay, waxaan aaaminsaneyn inaan u baahanahay kaliya inaan gaarno ilaa kulanka seddexaad ka dibna uu Wayne Rooney nagu hogaamin doono koobka Euro. Malaha wax weyn ayay ku noqotay inaan taas dhan weydiisano”.